Doorashada Guddoonka Baarlamaanka oo noqon doonta mid go’aamisa cida Madaxweyne noqoneyso (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • January 10, 2017
Iyadoo 11-ka bishan oo ku beegan Maalinta Arbacada lagu wado inay dhacdo doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa loolan adag loo geli doona cida ku guuleysan doonta xilkaas, waxaana doorashada Guddoonka Baarlamaanka oo ah mid xiiso leh lala meel dhigayaa mida Madaxweynaha.
Akhriso: Magacyada 22 xildhibaan oo isu soo sharaxday Doorashada Guddoonka Baarlamaanka
Guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay magacyada musharaxiinta doorashada guddoonka Baarlamaanka oo ay ansixiyeen araajidooda.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo maanta mar kale ka doodaya hanaanka doorashada 2016
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah mar kale ka doodi doona sharciga lagu fulinayo doorashada dadban ee qorshuhu yahay in bisha Agosto ee sanadkan uu ka dhaco dalka.
Kulankii Baarlamaanka oo lagu kala dareeray, markii Wasiirka Amniga iyo Taliyeyaashiisa ay baaqdeen
Kulankii Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka maanta isugu yimid Xarunta Golaha Shacabka ayaa lagu kala dareeray, kadib markii Wasiirka Amniga iyo Taliyaha Nabadsugida oo lagu waday inay hor-yimaadaan Baarlamaanka ay baaqdeen.
DEG DEG: Wasiirka Arrimaha Gudaha Odawaa oo loo dhaariyay Xubinimada Baarlamaanka
Sagal Radio Services • News Report • November 9, 2015
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa goor dhow loo dhaariyay Xubinimada Baarlamaanka Soomaaliya, isagoo bedelay Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo 1-dii bishan ku geeriyooday weerarkii Hotel Saxafi.
Fowziyo Yuusuf “Si aan dalka dhowr sano dib ugu dhicin waa in Baarlamaanka muddo yar la siiyaa oo waqtiga loo kordhiyaa”
Sagal Radio Services • News Report • July 21, 2015
Xildhibaanad Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqday in muddo kordhin loo sameeyo Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka. Xildhibaanad Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqday in muddo kordhin loo sameeyo Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka.
Kalfadhiga lixaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmaya iyo Amniga oo la adkeeyay
Sagal Radio Services • News Report • April 27, 2015
Kalfadhiga lixaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u furmi doona, iyadoo qeybo badan oo ka mid ah magaalada amnigeeda si aad ah loo adkeeyay, gaar ahaan wadooyinka oo ciidamo kala duwan la dhigay.
Gudoonka Baarlamaanka oo sheegay in Maalinta sabtida la horkeenayo Xukuumada cusub
Gudoonka Baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday in horaanta todobaadka soo socda la horkeeni doono Xukuumada cusub ee uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, si codka kalsoonida loogu qaado.
Daawo Sawirada Kulankii Baarlamaanka oo lasoo xiray iyo Xildhibaanada oo loo qeybiyay Mooshinka
Waxaa Goordhaw lasoo xiray Kulankii Baarlamaanka Soomaaliya ku lahaayeen Magaalada Muqdisho kaa oo ajandaha ugu muhiimsan ee kulanka uu ahaa in Xildhibaanada Baarlamaanka loogu qeybiyo Mooshinka ka dhanka ah Xukuumada Soomaaliya iyo Miisaaniyada Dowlada ee sanada 2015-ka.
DaawoSariradda:Kulankii Baarlamaanka Soomaaliya oo ka furmi waaya Xildhibaanno Heesaya
Kulankii baarlamaanka Somalia ee maanta ayaa mar kale furmi waayay, kaddib markii xildhibaannada mooshinka kasoo horjeeda ay billaabeen inay heesaan markii la doonayay in kulanka la furo.
Taliyihii Ciidanka Nabad Sugida oo Maanta kamid noqonaya Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia
Warar lagu kalsoonaan karo ay heleyso Shabakada Allbanaadir.com ayaa sheegaya in maanta lagu wado in Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho lagu dhaariyo Taliyihii hore ee Ciidanka Nabad Sugida Jen Bashiir Maxamed Jaamac(Bashiir Goobe).